अन्ततः माओवादी सरकारमा जाने, यस्तो भयो निर्णय ! – Setosurya
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा मन्त्री पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार नै माओवादीका मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने तयारी गरेका थिए । तर, सरकारमा कसले नेतृत्व गरेर जाने भन्ने विषयमा माओवादीभित्र विवाद भएका कारण बिहीबार माओवादीका मन्त्रीले सपथ लिन नसकेका हुन् ।
ओली नेतृत्वको सरमार माओवादीका तर्फबाट नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले गर्न चाहेका थिए । तर, अर्का नेता थापाले सरकारको नेतृत्व गरेर मन्त्री बन्ने इच्छा जनाएपछि माओवादीभित्रकै आन्तरिक विवादले बिहीबार मन्त्री बन्ने अवसर नमिलेको हो ।
माओवादीले छिट्टै पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर नेता थापाको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्रीहरू पठाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसका लागि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले तयारी गरेका छन् ।
थापालाई यसअघि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने तयारी भएको थियो । यद्यपि, अन्तिम समयमा आएर थापाले मन्त्री बन्ने लोभ देखाएका कारण बिहीबारको सपथमा केही समस्या भएको स्रोतको दाबी छ ।
अाज(फागुन ४ गते) सूर्यग्रहण लाग्दै, यी ७ राशि भएकाहरुकाे चम्किनेछ भाग्य !
यस्तो बन्यो एकीकरणको खाका ! २ अध्यक्ष, ११ जनाको स्थायी कमिटी र ४३ जनाको पोलिटब्युरो (नामावली सहित)
एमाले माओबादी एकताले कांग्रेसमा खैलाबैला, गगन थापाले आतिदै मुख खोले
नारायणकाजीको प्रश्नः भारतमा सोनियालाई रोक्ने, नेपालमा अंगीकृतलाई उचाल्ने ?
के होला अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यकाल ?
प्रचण्ड र ओली बीचको सहमती पछि सबै वामपन्थीहरुलाई आयो यस्तो खुशिको खबर, यसरी हुने भयो एकता
देशको ठूलो पार्टीको ठूलै खर्च, महाधिवेशन गर्न साढे चार करोड
अध्यक्ष पदमा ओलीलाई जिताउन काँग्रेसका चार नेता एमालेमा प्रवेश
एमाले नेताको संश्लेषणः मेची महाकाली अभियानका ५ फाइदा, यस्तो छ सूर्यथापा र विष्णु रिजालको निश्कर्ष
पोखराको होटलमा आगलागी, तीन करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति